Ciidamada Itoobiya oo Baladweyne ka bilaabay Miino saaris & Barakac socda – SBC
Ciidamada Itoobiya oo Baladweyne ka bilaabay Miino saaris & Barakac socda
Ciidamada Dowlada itoobiya iyo kuwa Soomalida ah eek u sugan magaalada Baladweyne xarunta gobolkaasi Hiiraan ayaa saacadihii ugu dambeeyay howlgalo ay ka sameeyeen xaafado ka mid ah magaaladaasi waxa ay ku soo saareen miinooyin lagu aasay.
Dad goob joogayaal ah oo la hadlay xafiiska SBC ee Magaalada Garoowe ayaa sheegay in ay arkayeen xiliyadii howlgalada lagu saarayo miinooyinka ama waxyaabaha qarxa ay wadeen ciidamada Soomaalida ah iyo kuwa Itoobiyaanka, iyagoona intaasi ku daray in ay xaafadaha qaar ka soo saareen cidiamada miinooyin badan.
Howlgalada lagu saarayo waxyaabaha qarxa ayaa ay ku dhaqaaqeen ciidamada Itoobiyaanka ah iyo kuwa itoobiya ka dib markii ay soo bateen qaraxyada is xig xiga ee ay ciidamada itoobiya iyo kuwa soomaalida lagula eeganayo gudaha magaalada Baladweyne.
Todobaadyadii ugu dambeeyay ayay aheyd markii ciidamada Itoobiya lala eegtay qaraxyo noocan oo kale ah, kuwaasi oo sababay khasaarooyin soo gaara ciidanka iyo weliba kuwo soo gaara dadka deegaanka.
Dhinaca kale xaafado ka mid ah magaalada Baladweyne gaar ahaan xaafadaha ay ku yaalaan fariisimada ciidamada Itoobiya ayaa noqday maalmihii ugu dambeeyay kuwo laga barakacyo iyadoona dadkii degenaa ay isaga qaxeen cabsi ay ka qabaan qaraxyada lala eeganayo ciidamada Itoobiya awged.
Dadka qaar ayaa u barakacay goobo banaanka ka ah magaalada halka qaarkiina ay abaareen xaafadaha kale ee isla magaalada Baladweyne, waxaana weli ka socda qeybo ka mid ah xaafadahaasi barakaca.
Sababaha ugu weyn ee ay u barakacayaan dadkani waxa ay yihiin Rasaas aan loo meel daryin oo ay furan ciidamada Itoobiya ka dib markii qarax lala eegto, taasi oo saameyn buuxda ku keentay dadka, qaarkiina dadka rayidka ahi ay ku nafwaayeen,